ထောက်ခံချက်ထလော့ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါတိုင်းလူငယ်တစ်ဦးဖတ်ရန်လိုအပ်သည်ထင်သော "ခရီးစဉ်ရဲ့ရေးထားလျက်ရှိ၏စာအုပ်. ယရှေုသညျနှငျ့ဤမျိုးဆက်သည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဆင့်လာ. ငါသည်ဤသတင်းစကားကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်အပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်မစောင့်နိုင်ပါ။ "
- Lecrae, ဂရမ်မီဆုပေးပွဲ- အနိုင်ရအနုပညာရှင် @lecrae
"ထကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏နှလုံးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အင်မတန်ထူးခြားဆန်းကြယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်. အဖြစ်မကြာမီငါကတက်ခူးသကဲ့သို့ငါကဆငျးသကျကိုမထားနိုင်. ခရီးစဉ်အစစ်အမှန်ဖြစ်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်, သငျတို့သမည်ကဲ့သို့သင်၏အသက်တာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာလူငယ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်အသက်ရှင်ရန်ပြသထားတယ်. ဂရိတ်ဖတ်။ "
- ဆမ်ငါ, NFL linebacker, လူသားချင်းစာနာထောက်ထား @thesamacho
"ခရီးစဉ်ငါငယ်ငယ်တုန်းကငါဖတ်ပါတယ်လိုတဲ့စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်. သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု, ဉာဏ်ပညာကို, နှင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကိုစိန်ခေါ်ဖို့အလိုဆန္ဒညျဘုရားသခငျ၏ခရီးစဉ်နှင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအားဖြင့်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကတဆင့်လုပ်နေတာအလုပ်ကိုတစ်ဦးသေတမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ "
- က Kirk Franklin, ဂရမ်မီဆုချီးမြှင့်- အနိုင်ရနှင့် Multi-ပလက်တီနမ်မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင် @kirkfranklin
"ငါသည်ထစာဖတ်ခြင်းကိုခစျြ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Medi ကိုတွေ့သည်ဤစာအုပ်ထဲတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ- သူတို့ကိုငါဖတ်ပြီးနောက်စာမျက်နှာများကိုကျော် tating. ငါအားပေးအားမြှောက်ခဲ့သည်, မှုတ်သွင်းခံ, နှင့်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုစိန်ခေါ်. အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ဖြုန်းဖို့မြျှောလငျ့သျောလညျးဘုရားသခငျကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုအဘို့ငါတို့အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်လိုလား. ဤသည်ကိုပညာရှိရှိသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုသုံးပါနှင့်နိုငျငံတျောအဘို့အခြားနားချက်ဖြစ်စေလိုသောသူတို့အဘို့အံ့သြဖွယ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
- Justin ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကို, NFL @JForsett ပြန်ပြေး
"ဒါကြောင့်မကြာခဏကျွန်တော်တစ်ဦးခြားနားချက်စေလိုသောအကြောင်းပြောဆို, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကတကယ်တော့တက်ရဘာမှလုပ်မရကြဘူး. အကြှနျုပျ၏ရဲ့ buddy, ခရီးစဉ် Lee က, ထဲကလွယ်ကူသောလမ်းယူရန်သွန်သင်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်အောက်မှာမီးလင်းလိမ့်မည်ဟုစာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်. သူကသည်ငါတို့အဘို့ဘုရားသခင့်ကိုဖန်ဆင်းကြောင်း '' မြင့်တက် 'ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နှင့်ဇာတ်လမ်းမှာနေထိုင်င်. ငါသိလူတိုင်းအတွက်ရန်ဤစာအုပ်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်ငါသိ၏။ "
- စတီဖင်ဟင်း, NBA ကစားသမားဟောင်း @ stephencurry30
သငျသညျခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်ဝယ်နိုင်, တက်, စာအုပ်များရောင်းချနေရာတိုင်းမှာ. ပိုပြီးအချိန်၌ထွက်ရှာမည် Risebook.tv
kelvin masiala kalaluka • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 2:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Innocent • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 2:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
WIZEMAN • ဇန္နဝါရီလ 28, 2015 တွင် 4:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kemi iDREAM • ဇန္နဝါရီလ 28, 2015 တွင် 11:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Phil • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2015 တွင် 1:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Tireo • ဇူလိုင်လ 17, 2015 တွင် 11:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်